इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीकाे सहज जित - नेपालबहस
इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीकाे सहज जित
| ७:५०:२१ मा प्रकाशित
१ चैत, एजेन्सी । सर्जियो अगुएरोले सन् २०२० को जनवरीपछि पहिलो गोल गर्दा म्यान्चेस्टर सिटीले फुलहमलाई हराउँदै प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा आफ्नो अग्रता फराकिलो बनाएको छ । शनिबार भएको खेलमा फुलहमविरुद्ध ३–० को जीत निकाल्दै पेप ग्वार्डिओलाको टोलीले शीर्ष स्थानमा १७ अंकको अग्रता बनाउन सफल भएको हो ।
खेलको ४७ औँ मिनेटमा जोन स्टोनले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाए भने ग्याब्रियल जिसुसले अग्रता दोब्बर बनाए । खेलको ६० औँ मिनेटमा पेनाल्टीबाट अगुएरोले गोल गर्दै सिटीको जीत सुनिश्चित गरे । अगुएरोले पछिल्लो पटक ४१७ दिनअघि सेफिल्ड युनाइटेडविरुद्ध गोल गरेका थिए ।
३० खेलपछि सिटीको ७१ अंक रहेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेडले दुई खेल कम खेलेको छ । उसको ५४ अंक रहेको छ । शनिबार नै भएका अन्य खेलमा चेल्सी लिड्ससँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ ।
नयाँ प्रशिक्षक थोमस टुकलको नेतृत्वमा चेल्सी सबै प्रतियोगितामा खेलिएका १२ खेलमा अपराजित रहेको छ । उता, एर्भटन बर्नलीसँग १–२ गोलले स्तब्ध बन्यो भने क्रिस्टल प्यालेसले वेस्टब्रोमिच आल्बियोनलाई १–० गोलले हरायो ।
शहीद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिग : मनोहरा विजयी १ महिना पहिले
ब्राजिलमा कोरोनाबाट एकै दिन १ हजार भन्दा बढिको मृत्यु भर्खरै
सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखायाे : नेता सिंह ६ मिनेट पहिले
हुलाक टिकट बिक्री काउन्टरको व्यवस्था गर्दै जिप्रका ७ मिनेट पहिले
प्रथम मेयर कप फुटसल प्रतियोगिता वैशाख ९ बाट १४ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिद्धारा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त १९ मिनेट पहिले
मतदातासँग भेटघाटमा व्यस्त वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी २६ मिनेट पहिले
उत्पादन बढाउन भकारो सुधार अभियानमा किसान ३१ मिनेट पहिले
गायिका रिनाको कस्तो माया जाल ३३ मिनेट पहिले
सरकारले हठा्त अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दलहरुसँग परामर्शमा माओवादी केन्द्र ३३ मिनेट पहिले
लेकाली भेगैमा सुनिलसँग उर्मिलाको रोमान्स ३६ मिनेट पहिले
सौन्दर्य पेशाको भविश्य सुनौलो छ : वरिष्ठ सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित ४१ मिनेट पहिले
दूध बिक्रीका लागि सङ्कलन केन्द्रतर्फ जाँदै महिला ४३ मिनेट पहिले
शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द ४४ मिनेट पहिले
‘भूमि सूचना पद्धति’ र ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम आजबाट आरम्भ ४ दिन पहिले
हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीले २२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने, पायो ‘एनपी आइआर बीबी प्लस’ रेटिङ ४ हप्ता पहिले
चैत्र १८ गते बोलाइयाे लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक ३ हप्ता पहिले
उच्च र न्यून शेयरमूल्य भएका लघुवित्त कम्पनी २ हप्ता पहिले
विकट गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा : जहाँ पशुलाई झारफुक गरिन्छ ! २ वर्ष पहिले
कोरोना महामारीमा विमानस्थलमा यात्रुको मनपरी, वायुसेवा कम्पनीको लापरवाही ! ४ महिना पहिले
मृतक यादवका परिवारलाई रु पाँच लाख हस्तान्तरण ९ महिना पहिले